I-china Muscle deep electric massage gun imishini yokukhiqiza abakhiqizi nabaphakeli Zhaolong
Ithebula emi isandla amagwebu touchless othomathikhi ...
Idivaysi ekhipha insipho ene-foam engagunci
Izingane zasekhaya lokungeniswa ohlakaniphile amagwebu washin ...
Ama-Auto Liquid Dispensers Inzwa Engathinti I-Auto Foam Ngakho ...
Imisipha imishini yokuzivocavoca imisipha ejulile
Intengo yentela ye-Ex-factory RMB (yuan / set)
Uhlobo lwemoto: BLDC5520, DIA.55MM brushless DC
Amandla webhethri: 2500mAh （18650 Li-on Battery 6pcs）
Izinhloko Zokumasaja: 17 amakhanda wokubhucungwa
Amplitude ibanga: 10.0mm
I-motor torque: 50 mN.m
Shintsha: 30-isikhundla switch
Isilawuli sokuthinta isikrini
Zungezisa Isivinini: 1200-2700RPM
Isikhathi sokushaja: 1.5-3hours
Isikhathi sokusebenza: 6-12hours
Usayizi womkhiqizo: 172.5 * 65.5 * 144.5mm
I-FDA， FCC ， CE ， ROHS
indwangu yesikhwama sethuluzi ibhokisi + ibhokisi leposi
Ochwepheshe Bokubhucunga Isibhamu
Ngokushaya njalo imisipha nokukhulula izigaxa ezicutshini ezijulile zemisipha, isibhamu sethu sokubhucunga umzimba singakhulula ngempumelelo ukukhathazeka kwemisipha nokuhlangana. Ungumngane omuhle wokuphila okunempilo.
Ubungqabavu Obuguquguqukayo + Abafakizicelo Bokubuyisa Abangashintsha
Sibheka zonke izidingo zakho. Khetha isivinini esivumelana kangcono nesidingo sakho, bese ushintsha amakhanda okubhucunga ukuze uqondise ngokunembile izingxenye zomzimba ezahlukahlukene namaqembu emisipha.
Isikhathi Eside Sokusebenza + Umsebenzi Wesikhathi Esizenzakalelayo
Ifakwe ibhethri elishajekayo le-lithium-ion elingu-2500mAh, isibhamu sokubhucunga i-percussion singaqhubeka sisebenza kuze kufike emahoreni ayi-12.
I-Brushless Motor + ukushabalalisa ukushisa
Yakhelwe nge-torque ephezulu enamandla kakhulu, asikho isidingo sokukhathazeka ngokwenza umsindo othinta abanye. Ngaphandle kwalokho, ifaka umsebenzi wokuqothula ukushisa okunamandla kakhulu, okugcina ukubhucungwa kwemisipha kuqine.
I-Unique Balance Design
Icala eliqinile elingaphandle livimbela ukwenzeka kwe-acoustic ukuthi kwenzeke futhi ibhawodi ngalinye lifakwe nge-adhesive shockproof. Idizayini yebhalansi nesibambo esinethezekile kwenza kube lula ukuphatha ngesandla nokulwa nokudonsa.
Okunamathiselwe ekhanda kwesibhamu
Izibhamu zethu zokubhucunga umzimba zinikezwa ngamakhanda aphathekayo angu-17, alula ukuwahlanza. Ngokubambisana amakhanda ahlukene asekela izindlela zokwelapha ezahlukahlukene ukusekela impilo yakho nokusebenza.
Inhloko emise ibhola ye-EVA: amaqembu emisipha emikhulu nezicubu ze-fascia.
Inhloko emise okwe-ABS okwekhanda: zonke izingxenye zemisipha.
Ikhanda elenziwe ngo-ABS: intamo nomgogodla.
Ikhanda le-ABS 3-claws: intamo, amahlombe nemilenze.
Ikhanda elenziwe ngemfoloko le-ABS: ihlombe nengalo.
Ikhanda elenziwe nge-ABS: izinyawo ezinyaweni, izintende zezandla, imisipha ye-Achilles.
Ikhanda elenziwe ngethoshi le-ABS: isundu & yedwa.
Ikhanda le-ABS tapered: amalunga nezicubu ezijulile.
Inhloko emiswe ngenqindi ye-ABS: amaqembu emisipha emikhulu.
Inhloko emiswe okwe-mushroom ye-ABS: izikhwama zangaphansi.
Ikhanda lezibhakela ze-ABS: amaqembu amakhulu emisipha nasemhlane.
Ikhanda le-ABS flat shape: zonke izitho zomzimba.
Ikhanda elenziwe ngembali le-ABS: zonke izingxenye zemisipha.
Ikhanda lesigaxa se-ABS: amalunga nezicubu ezijulile.
Ikhanda le-ABS convex: amaqembu amakhulu emisipha.
Amabhola we-2x Bonus Massage: athambile futhi ane-spiky.
Langaphambilini Isiphathi Sikagesi Esiphathwayo Esiphathekayo Esiphathekayo Esinamandla Esincane Semisipha Sokubhucunga
Olandelayo: Isixwa Body Muscle Massage Gun
Isicubu Esijulile Sokushukuma Kwemisipha
Brushless Massager 30 isivinini Low Sound Vibration ...
Isixwa Body Muscle Massage Gun
Izithambo zokukhulula ubuhlungu bezicubu ezijulile ezingenantambo ...
Umzimba Massager Gun Deep Pressure Rambisa Massage ...
Aphathwayo Electric Fascia Gun ephathekayo Inamandla ...